November | 2007 | Save Burma
News on Burma’s Geopolitics (30-11-2007)
Garry Kasparov gave an impromptu news conference outside his home in Moscow shortly after being released from jail. By CLIFFORD J. LEVY and MICHAEL SCHWIRTZ MOSCOW, Nov. 29 – Released from jail after servingafive-day sentence for leading an …
Fraud, intimidation and bribery as Putin prepares for victory Guardian Unlimited
Russia’s Ruling Party Accused of Pressuring Voters Voice of America
Pakistan Opposition Divided Over Poll
By STEPHEN GRAHAM, AP Writer ISLAMABAD, Pakistan – Pakistani opposition leaders were divided Friday on whether to contest parliamentary elections under President Pervez Musharraf,aday after he bowed to international pressure by saying he would end …
Musharraf Sets Date for End of Emergency Rule New York Times
Ex-leader Sharif to boycott Pakistani elections USA Today
Bloomberg – Boston Globe – Voice of America – Houston Chronicle
By Douglas Bakshian Filipino analysts say Thursday’s botched coup attempt ataluxury hotel in Manila was politically embarrassing for the Philippines, which has experienced numerous coup plots in the past two decades.
Philippine Soldiers, Supporters Arrested After Failed Revolt Wall Street Journal
Philippines Boosts Manila Troops After Yesterday’s Failed Coup Bloomberg
Reuters Canada – AHN – BBC News – ABS CBN News
ISLAMABAD (Reuters) – Pakistani politics are dominated more by personalities than ideology. Here isaguide to the key …
Forbes – New York Times – Bloomberg
Iranian, EU Officials Discuss Nuclear Program
Voice of America –4hours ago
By VOA News European Union foreign policy chief Javier Solana is meeting in London with Iran’s chief nuclear negotiator, Saeed Jalili, to discuss Tehran’s controversial nuclear program.
EU disappointed after nuclear talks with Iran Reuters Canada
Iranian negotiator says “positive” on Solana talks Reuters
AFP – United Press International – The Associated Press – RIA Novosti
Tagged with , Coup attempt, Iran, Kasparov, Mussharaf, Nuclear, Pakistan, Philippine, Russia
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု လုံးဝမရှိတော့။ အစဉ်အလာကောင်း ယဉ်ကျေးမှုတို့လည်း ပျက်သုန်းလေပြီ။
မတရားသည့် ဥပဒေကို ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူတို့က ကြိတ်မှတ် ခေါင်းငုံ့ခံပေး နေရသည်ကိုပင် အာဏာရှင် လူရမ်းကားတို့က အားမရသေး။
လူမျိုးတုန်း၊ သာသနာတုန်းအောင် ရမ်းကားလွန်းနေသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတွင် မကြုံစဖူး ဖြစ်နေတော့သည်။
တိုင်းတပါးမှ ကျွန်လာပြုသော အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့နှင့် ဂျပန်ဖက်ဆစ်တို့ပင် ဤမျှလောက် မရက်စက်ဟု လူကြီးသူမတို့က ပြောဆိုနေကြသည်ကို တစက္ကန့် တမိနစ်မျှ စဉ်းစားကြည့်စေဖို့ ကောင်းသည်။
အာဏာယစ်မူးနေသော ခေါင်းဆောင်တို့က ရဟန်းသံဃာ မြင်တိုင်း မိုက်ရိုင်းနေကြသည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးဟုပင် မခေါ်အပ်တော့။
ထိုခေါင်းဆောင်တို့နှင့် နောက်လိုက် လက်ကိုင်တုတ်တို့က မြတ်စွာဘုရား၏ သားတော်များအပေါ် ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံတို့ဖြင့် ပြစ်မှားခဲ့ပြီးသည့်နောက်ပိုင်း ၀န်ချတောင်းပန်ခြင်း မရှိသေးပဲနှင့် မိမိတို့အိမ်က တခမ်းတနား ကိုးကွယ်ထားတဲ့ ဘုရားစင်ရှေ့မှာ ထိုင်ရှိခိုးဝံသေး၏လော။
အထက်အမိန့်ဆိုသည့် စကားလုံးဖြင့် နောက်လိုက်ငယ်သားတို့အား ခိုင်းစေကာ မြေခွေးအမြီးပြတ် ဖြစ်အောင်၊ အ၀ီစိငရဲရောက်အောင် လုပ်နေသည်ကို နိုင်ငံ့အခွန်ငွေ စားသောက်နေရသူအပေါင်း သတိရှိဖို့ လိုပြီ။
မြတ်စွာဘုရား၏ ဓမ္မ ထုံးတမ်းစဉ်လာနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထုံးတမ်းစဉ်လာတို့ကို စစ်အာာဏာရှင် လူရမ်းကားတစုတို့က ချိုးဖောက် ဖျက်ဆီးနေသည်။
မဂ္ဂင်ကျောင်းတိုက်ကိစ္စကို နိုင်ငံတကာရှုထောင့်အရ ကြည့်လျှင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု၊ လူသားများအပေါ် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုနှင့် ဘာသာရေး နှိပ်ကွပ်မှုများကို စစ်အစိုးရက ပြောင်တင်းတင်း ကျူုးလွန်နေသည်သာမက အိုးအိမ်နှင့် မြေယာ ပိုင်ဆိုင်သည့် အခွင့်အရေးကိုပါ ကျူးလွန်လာကြောင်း အထောက်အထား ခိုင်လုံစွာ တွေ့နေရသည်။
အလုံးစုံ ပျက်သုန်းရေးကို အာဏာရှင်ကိုယ်တိုင်က ဖန်တီးနေသည် ဟုသာ ဆိုရပေလိမ့်မည်။
Rights Group Says Arrests in Burma Continue
Hla Hla Than’s Report in Burmese – 1.22 MB
Listen to Hla Hla Than’s Report in Burmese
A man was carried away after being shot by the Burmese troops, 27 Sept. 2007 (Mizzima News)
Amnesty International has condemned the continuing arrests of political activists inside Burma despite what it says was the government’s pledge to stop.
Burmese officials say 15 people were killed and nearly three-thousand detained in the September crackdown. Diplomats and human rights groups say the figures are much higher.
Also Tuesday,aBritish academic organization gave Burmese opposition leader Aung San Suu Kyialifetime achievement award.
She has spent 12 of the last 18 years under some form of detention and remains under house arrest in Rangoon.
To read in Burmese , click
Tagged with , Amnesty International, Arrest, Burma, Myanmar, VOA Burmese